Yangon – Page2– Department of Medical Service
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် တွင်တည်ရှိ၍ အရှေ့သို့လားသော် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း၊ အနောက်သို့လား သော် ၅၄-လမ်း၊ တောင်သို့လားသော် ကုန်သည်လမ်း၊ မြောက် သို့လားသော် မဟာဗန္ဓုလလမ်းတို့ ၀န်ရံထားပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ။ အမှတ်(၂၆၂)ကုန်သည်လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၀၁-၂၉၂၈၃၅ ၊ ၀၁-၂၉၂၈၃၆ ၊ ၀၁-၂၉၂၈၃၇ ၀၁-၂၉၁၁၃၆ (ဆေးရုံအုပ်ကြီးရုံးခန်း) ၊ (Fax No.) ၀၁-၂၉၂၁၁၈ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ(General / Speciality Units) ၁- ဆေးပညာ ၂- ခွဲစိတ် ၃- သားဖွားမီးယပ် ၄- ကလေး ၅- မေ့ဆေး ၆- အရိုးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ၇- မျက်စိ ၈-... Read More | Share it now!
၁။ဆေးရုံတည်ရှိရာတည်နေရာ (Location) နှင့်ဓါတ်ပုံ ၂။ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ – ၁၂၃၊ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့်ညောင်တုန်းလမ်းထောင့်၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁-၃၆၄၅၀၃၁ Fax နံပါတ် – ၀၁-၉၆၄၈၁၆၂ Email – htygeneralhospital 13 @ gmail.com ၃။ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာန၊အရိုးကုသဆောင်၊ခွဲစိတ်ကုသ ဆောင်၊မျက်စိကုသဆောင်၊ဆေးကုသဆောင်၊ကလေးကုသ ဆောင်၊သားဖွားမီးယပ်ကုသဆောင်၊ ART / TB ဆေးကုသ ဆောင် ၄။ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ- General OPD Timetable – နံနက်၈ :၀၀နာရီမှနေ့လည်၁၂ :... Read More | Share it now!
Posted on June 5, 2019 by author 1
၁။ဆေးရုံတည်နေရာ ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီးနှင့်ရှုခင်းသာလမ်းမကြီးထောင့်၊သာကေတအဝိုင်းထိပ်အနီး၊ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၇/အရှေ့ရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ၃။ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီးနှင့်ရှုခင်းသာလမ်းမကြီးထောင့်၊သာကေတအဝိုင်းထိပ်အနီး၊ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၇/အရှေ့ရပ်ကွက်၊သာကေတမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ စဉ် နေရာ ဖုန်းနံပါတ် Fax No ၁။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးရုံးခန်း 01 – 450791 01 – 450791 ၂။ General OPD Room 01 – 450792 Ext :0၃။ Office Room 01 – 450792 Ext : 102 ၄။ Inpaitent Room 01 – 450972 Ext : 103 ၅။ X-Ray Room 01 – 450792 Ext : 104 ၆။ Lab Room 01 – 450792 Ext : 105 ၇။ Medical Store Room 01 – 450792 Ext : 106 ၈။ Specialist OPD & ART OPD Room 01 – 450792... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ (Location) အမှတ်(၂)ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း ၊ ပြည်နောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် တည်ရှိပြီး၊ ဆေးရုံဟောင်း ၊ တိုးချဲ့ဆောင် နှင့် တိုးချဲ့ဆောင်သစ် စုစုပေါင်း မြေအကျယ်အဝန်းမှာ – ၁၀.၂၁၁ ဧက ရှိပါသည်။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (ဖုန်းနံပါတ် ၊ Fax No , Official E-mail address) အမှတ်(၂)ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း ၊ ပြည်နောက်ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်းနံပါတ် – ၂၂၂၈၀၇ ၊ ၂၂၂၈၀၈ ၊ ၂၂၂၈၀၉ ၊ လိုင်းခွဲ – ၉ Fax No – ၀၁၂၂၁၄၂၁ Official E -mail address – susudwe2012@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) General... Read More | Share it now!
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းခွဲစိတ်အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ (Location) နှင့်ဓါတ်ပုံ – ဗညားဒလလမ်းနှင့် ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းထောင့် ၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁ ၅၄၄၀၀၀ Fax No. – ၀၁ ၅၄၃၈၈၈ Email Address – orlhnstamweygn@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ(General/ Speciality Units) Speciality Units for Ear, Nose & Throat ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ Specialist OPD Timetable Monday to Friday ( 8:00 am to 11:30 AM) ... Read More | Share it now!